Tour Factory - Zhejiang Tonva caag ah mashiinka CO., LTD
Aqoon isweydaarsiga mashiinka
Waxaan had iyo jeer gelinaa tikniyoolajiyada iyo horumarka meesha ugu horeysa. Waxaan leenahay qol cilmi baaris iyo horumarin madaxbanaan, waxaana ku qalabeysan koox xirfadlayaal ah R & D, oo ay kujiraan injineero wax taaj oo kale ah oo dharbaaxo leh, injineerada naqshadeynta caaryada, farsamayaqaanada wax ku duubaya, iwm.
Aqoon-isweydaarsi Qaab dhismeed
TONVA waxay ku qalabeysan tahay nidaam wax soo saar sare leh iyo mashiinno ganaax ah. Waxaan si qoto dheer u aaminsanahay in tayada iyo xawaaruhu ay yihiin xubno muhiim u ah ku guuleysiga tartanka, mashiinada horumarsan, ma aha oo kaliya inay sii wanaajin karaan tayada si isdaba joog ah, laakiin sidoo kale waxay gaabin karaan wareegga wax soo saarka oo ay ka dhigi karaan alaabada macaamiisha mid tartan ku leh suuqa.
Ku saabsan ka saarida
100% kormeerka tayada kahor rarka.
Waxaan mashiinka ka saareynaa iyadoo loo eegayo shuruudaha iibsadaha ee ku saabsan sheyga heer debugging .Kadib markii iibsaduhu xaqiijiyo shaybaarka, wuxuu gali doonaa marxaladda bixinta. Injineeradayadu waxay dibada u aadi karaan khaladaadka ciridka, iibsaduhu wuxuu sidoo kale injineerada u diri karaa warshadeena si uu u barto howlgalka.